Ukubuyekezwa Okuceliwe noma Okukhokhelwayo ukubuyekeza Okuyingozi | Martech Zone
Sibe nengxoxo eqinile emcimbini wobuholi besifunda ngokuqoqa izibuyekezo ezivela kumabhizinisi nakubathengi online. Ingxoxo enkulu ibisondele ekubukezweni okukhokhelwayo noma kumakhasimende avuzayo ngokubuyekezwa. Angiyena ummeli, ngakho-ke ngincoma ukuthi ukhulume nabakho ngaphambi kokungilalela. Ukuma kwami ​​kulokhu kulula… ungakhokhi noma ungaholi izibuyekezo. Ungahle ungavumelani nami, kepha njengoba imboni yokusesha ye-organic yehlulwa ngamazinga anyusa ngamanga, ukubuyekezwa kunenkinga efanayo. Futhi izinkampani ezibambe iqhaza zalahlekelwa okuningi kakhulu kunalokho ezake zakuthola.
Izingozi Zokubuyekezwa Okukhokhelwe Nokuvuzwa
Kuyinkolelo yami ukuthi uzoba nezinkinga ezi-4 uma ukhokha noma uvuza izibuyekezo:
izingqinamba zomthetho - Kungenzeka ukuthi wephula Imihlahlandlela ye-FTC. Akugcini lapho, isisebenzi, inkampani, noma umuntu omkhokhayo naye usengozini yokwephula imihlahlandlela ye-FTC. Namuhla, asiboni misebenzi eminingi kulokhu. Kodwa-ke, ngokuzayo ngikholelwa ukuthi kuzoba nezinhlelo ezenzelwe ukuhlonza ubudlelwano obuzogcina bufaka wonke amaqembu enkingeni. Ngaphandle kukahulumeni, ungamangali uma ubekwa icala elinye lamapulatifomu.
Ukwephulwa - Ungatshala kancane ekubuyekezweni namuhla, kepha uma ubanjwa wephula imigomo yesevisi yesayithi, lokho okuqukethwe kuzolahleka unomphela futhi idumela lakho lingalimala ngaphezu kwanoma yikuphi ukutshala imali owake wakwenza. Ukubanjwa ukhokhela ukubuyekezwa nokwenza lokho kwaziwe umphakathi akubalulekanga. Amarandi ambalwa asetshenziswe namuhla angabiza inkampani yakho konke kamuva.
Ubuqotho - Ngokuzimisela, buphi ubuqotho bakho njengebhizinisi? Ingabe ngempela le yindlela ofisa ukwenza ngayo ibhizinisi? Uma ungeke uthenjwe ukuphatha igama elihlanzekile online, uyakholelwa ngempela ukuthi abathengi namabhizinisi bazofuna ukwenza ibhizinisi nawe?
Quality - Zenzele umusa uhambe ufunde ezinye izibuyekezo Uhlu luka-Angie. Lokhu akuwona umusho owodwa, ukubuyekezwa kwekhwalithi okuchaza yonke inqubo abathengi abaningi abadlule kuyo nomhlinzeki wesevisi. Uhlu luka-Angie lusanda kwehlisa i-paywall yabo futhi abathengi manje sebeyabona ukuthi kungani ababhalisile abaningi bohlu luka-Angie beyithanda le nsizakalo. Ukubuyekezwa okuhle kunzima ukukukhohlisa.
Ngakho-ke Ungakuthola Kanjani Ukubuyekeza Okungaphezulu?
Kunomehluko phakathi kwe- ukucela ukubuyekezwa nokubacela. Ngabelane ngendaba eminyakeni embalwa eyedlule nge Ukucela ucwaningo lwe-GM lokho kwakukubi impela. Ngokuyisisekelo, uma ngiphendule noma yini engaphelele, ikhanda lomuntu belizosikwa. Ukucela lokho. Futhi ukutshela ikhasimende lakho ukuthi kukhona umvuzo wokubuyekezwa kwalo akufani nokucela isibuyekezo! Ungakwenzi.
Lapho elinye lamakhasimende ethu lisibhalela ngokubonga, lisithinta izithupha ku-inthanethi, noma lisitshela mathupha ukuthi lisazisa kangakanani, siyalibonga futhi sibuze ukuthi bangakubhala yini phansi… kungaba nobufakazi bamakhasimende noma ukubuyekeza online. Qaphela i-oda? Basitshele kuqala, sabe sesiyicela. Asizange siyicele ngaphandle kokufaka kwabo. Asithembisanga lutho ngokubuyisa, noma. Ngabe singalandelela ngesipho sokubonga? Vele, kepha bekungalindelwe futhi kungathembiswanga.
Ngincoma futhi ukuthi ngishicilele ikhasi lakho kusayithi ngalinye lokubuyekeza kusayithi lakho. Akunjalo ukucela ukuvumela amathemba namakhasimende azi ukuthi angakuthola kuphi… futhi ikhasimende elijabule lizogijimela ekhasini lakho le-Facebook futhi likunikeze isibuyekezo. Kwenze kube lula ukuthi amakhasimende akho akuthole, akufake ekuxhumaneni kwangaphakathi namakhasimende akho, futhi wabelane ngezibuyekezo zakho ezinhle lapho zithunyelwa.
Ikhwalithi yawo wonke amapulatifomu wokubuyekeza incike kakhulu kwikhwalithi yezibuyekezo abanazo lapho. Ngaphandle kwezinqubomgomo eziqinile, eziningi zalezi zinsizakalo ziphinde zifake ama-algorithms okususa ukubuyekezwa okungamanga. I-Amazon izimisele impela ngenqubomgomo yayo futhi manje isibambekile amangalela izinkulungwane zabantu abathengisa izibuyekezo. Nawa amanye amasayithi wokubuyekeza ajwayelekile nezinqubomgomo zawo:
Inqubomgomo Yokubuyekeza ye-Amazon
I-Amazon ayinciphisi amagama futhi ayifuni abangane, umndeni, noma amalungu enkampani ukuthi enze izibuyekezo. Futhi abafuni ukuthi ubakhokhele, kunjalo.
Ukubuyekezwa kokuphromotha - Ukuze kugcinwe ubuqotho bokubuyekezwa kwamakhasimende, asivumeli abaculi, ababhali, abathuthukisi, abakhiqizi, abashicileli, abathengisi noma abathengisi ukuthi babhale Ukubuyekezwa Kwamakhasimende ngemikhiqizo noma amasevisi abo, ukuthumela izibuyekezo ezingezinhle kwimikhiqizo noma amasevisi ancintisanayo. , noma ukuvotela usizo lwezibuyekezo. Ngesizathu esifanayo, amalungu omndeni noma abangane abaseduze bomuntu, iqembu, noma inkampani ethengisa e-Amazon kungenzeka bangabhali Ukubuyekezwa Kwekhasimende ngalezo zinto ezithile.
Ukubuyekezwa Okukhokhelwe - Asikuvumeli ukubuyekezwa noma amavoti ekusizeni kwezibuyekezo ezithunyelwa ukushintshana kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi inkokhelo (kungaba ngesimo semali noma izitifiketi zezipho), okuqukethwe kwebhonasi, ukungena emncintiswaneni noma ama-sweepstake, izaphulelo ekuthengeni okuzayo, umkhiqizo owengeziwe, noma ezinye izipho.
Inqubomgomo Yokubuyekeza yakwaGoogle
Inqubomgomo ye-Google Yokubuyekeza isho ngokusobala ukuthi izosusa okuqukethwe lokho yephula inqubomgomo yabo yokubuyekeza:
Ukungqubuzana kwezintshisekelo: Ukubuyekezwa kubaluleke kakhulu uma bethembekile futhi bengachemi. Uma ungumnikazi noma usebenza endaweni ethile, sicela ungabuyekezi ibhizinisi lakho noma umqashi wakho. Unganikeli noma wamukele imali, imikhiqizo, noma izinsizakalo ukubhala izibuyekezo zebhizinisi noma ukubhala izibuyekezo ezingezinhle ngomuntu oncintisana naye. Uma ungumnikazi webhizinisi, ungasethi iziteshi zokubuyekeza noma ama-kioski endaweni yakho yebhizinisi ukuze nje ucele izibuyekezo ezibhalwe endaweni yakho yebhizinisi.
Inqubomgomo Yokubuyekeza Yelp
I-Yelp flat out itshela amabhizinisi ukuthi Ungaceli Ukubuyekezwa:
Ukubuyekezwa okuceliwe mancane amathuba okuthi kunconywe yisoftware yethu ezenzakalelayo, futhi lokho kuzokuhlanyisa. Kungani lezi zibuyekezo zinganconyiwe? Yebo, sinomsebenzi omubi wokuzama ukusiza abasebenzisi bethu ukuthi bahlukanise phakathi kokubuyekezwa kwangempela nokukhohlisayo, kanti ngenkathi sicabanga ukuthi senza umsebenzi omuhle kuwo ngama-algorithm ethu amahle wekhompyutha, iqiniso elibuhlungu ukuthi ukubuyekezwa okuceliwe kuvame ukuwela ndawo phakathi . Cabanga, ngokwesibonelo, umnikazi webhizinisi "ocela" ukubuyekezwa ngokunamathisela i-laptop phambi kwekhasimende futhi emomotheka emmema ukuthi abhale isibuyekezo ngenkathi ebuka ihlombe lakhe. Asizidingi lezi zinhlobo zezibuyekezo, ngakho-ke akufanele kusimangaze lapho zinganconyiwe.
Inqubomgomo Yokubuyekeza Uhlu luka-Angie
Uhlu luka-Angie lucacile ngokumangalisayo kunqubomgomo yabo yokubuyekeza:
Konke ukubuyekezwa nezilinganiso zakho kuzosuselwa kokulandelayo: (i) Okuhlangenwe nakho kwakho ngokoqobo nabahlinzeki bensizakalo obabuyekayo; noma (ii) njengoba kuhlinzekwe ngaphansi kweSigaba 14 (Abahlinzeki Bezinsizakalo) ngezansi, umuntu kanye nolwazi lomuntu uqobo lokunakekelwa kwezempilo noma umhlinzeki wezempilo lapho unegunya lezomthetho lokudalula lolo lwazi lwezempilo kanye nolwazi lomuntu onjalo;
Zonke izibuyekezo zakho nezilinganiso zakho zabahlinzeki Bezinsizakalo Ozilinganisayo zizonemba, ziyiqiniso futhi ziphelele kuzo zonke izici;
Awusebenzeli, unanoma iyiphi intshisekelo, noma awusebenzi ebhodini labaqondisi, yanoma yimuphi wabahlinzeki Bezinsizakalo ohambisa izibuyekezo nezilinganiso zazo;
Awusebenzeli, unanoma iyiphi intshisekelo noma osebenzela ebhodini labaqondisi yanoma yimuphi umuntu oncintisana nabahlinzeki bezinsizakalo ohambisa ukubuyekezwa nezilinganiso zazo;
Awuhlobene nganoma iyiphi indlela (ngegazi, ngokutholwa, ngokushada, noma ngokubambisana kwasekhaya, uma uMhlinzeki Wensizakalo kungumuntu ngamunye) kunoma Yibaphi Abahlinzeki Bezinsizakalo Ohambisa izibuyekezo noma izilinganiso zazo;
Igama lakho kanye nemininingwane yokubuyekeza izotholakala kubahlinzeki benkonzo obabuyekeza kuyo; futhi
Uhlu luka-Angie lungaguqula, luguqule, noma lunqabe ukubuyekezwa kwakho uma kungahambisani nenqubo yokushicilela yohlu luka-Angie, engashintsha ngezikhathi ezithile ngokubona kuka-Angie's List kuphela.
Inqubomgomo Yokubuyekeza i-Facebook
I-Facebook ikhomba eyabo Amazinga Omphakathi kepha ayicacisi kakhulu mayelana nokucela noma ukubuyekeza okukhokhelwe yize kugcizelela ukubuyekezwa kwangempela.
Tags: inqubomgomo yokubuyekezwa kwe-amazonukubuyekezwa kwe-amazoni-amazon imangalela ababuyekeziinqubomgomo yokubuyekezwa kohlu luka-angieuhlu luka-angieinqubomgomo yokubuyekeza i-facebookukubuyekezwa kwe-facebookizinqubomgomo zokubukeza ze-googleinqubomgomo yokubuyekeza ye-googleizibuyekezo ze-googleukubuyekezwa okukhokhelweukubuyekezwa komvuzoinqubomgomo yokubuyekeza yelpukubuyekezwa kwe-yelp
I-Google Analytics: Amamethrikhi Wokubika Abalulekile Wokumaketha Okuqukethwe
I-LookBookHQ: I-Engagement Yokuqukethwe kanye ne-Automation Platform